အကူအညီ- တစ်စုတစ်စည်းတည်း အကောင့်ဝင်ပါ။ - Meta
အကူအညီ- တစ်စုတစ်စည်းတည်း အကောင့်ဝင်ပါ။
သင်၏ ကမ္ဘာ့အကောင့်' ('တစ်စုတစ်စည်းတည်းဝင်ရောက်ခြင်း' သို့မဟုတ် SUL/single user loginဟုလည်း ခေါ်သည်) သည် Wikimedia တွင် သိမ်းဆည်းထားသော သင်၏တစ်ခုတည်းသော သုံးစွဲသူအမည်ဖြစ်သည် Special:MyLanguage/Template:Main Page/Sisterprojects
၁.၂ How to unify your accounts
၁.၃ What it changes
၁.၄ What it doesn't change
၁.၅ Conflict resolution
၂ Frequently asked questions
၂.၁ Can my global username be renamed?
၂.၃ Someone is using my name on another wiki. How can I get that account?
၃.၁ Announcements and news
သင်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကောင့်သည် wiki များအားလုံးတွင် သင့်အမည်ကို သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည် (ထို့ကြောင့် သင့်အား အခြားမည်သူမျှ အယောင်ဆောင်၍မရပါ) နှင့် သင် ယခင်က မလည်ပတ်ဖူးသော wiki ကို ဝင်ကြည့်သောအခါတွင် သင့်ပြည်တွင်းအကောင့်ကို အလိုအလျောက်ဖန်တီးပေးပါသည်။
Blocks သည် ဒေသန္တရဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဝီကီတစ်ခုပေါ်တွင် ပိတ်ဆို့ထားသော သုံးစွဲသူများသည် အဆိုပါ wiki ရှိ စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးမှ အခြားနည်းဖြင့် ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိပါက အခြား wiki များတွင် ပိတ်ဆို့ထားမည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၊ အကောင့်တစ်ခုသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလော့ခ်ချထားခြင်း ဖြစ်ပါက ၎င်းအကောင့်ကို ဝီကီတိုင်းတွင် လော့ခ်ချမည်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူများသည် ဝဘ်ဆိုက်နှစ်ခုတွင် မတူညီသော အမည်ပေးထားသော အကောင့်များ ရှိနေနိုင်သေးသည်။ သို့သော်၊ ဤအကောင့်များကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကောင့်တစ်ခုတည်းသို့ အတူတကွ ချိတ်ဆက်မည်မဟုတ်ပါ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကောင့်စနစ်သည် ဝီကီမီဒီယာဖွင့်ထားသော ပရောဂျက်များအတွက်သာ ရနိုင်ပါသည်။ MediaWiki ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပေါ်တွင် လည်ပတ်သော်လည်း ဖောင်ဒေးရှင်းမှ လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသည့် ဆိုက်များသည် ပေါင်းစည်းဝင်ရောက်မှုစနစ်အတွက် တာဝန်ရှိသည့် CentralAuth တိုးချဲ့မှုကို ထည့်သွင်းထားသော်လည်း၊ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသည့် သီးခြားအကောင့်စနစ်များ ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
↑ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိတ်ကြိုက်များ
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Help:Unified_login/my&oldid=23360858"
Last edited on4June 2022, at 00:25
This page was last edited on4June 2022, at 00:25.